ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီရှိလတ်ဆတ်သောအလုပ်များအတွက်ဒူဘိုင်းတွင် MBA အလုပ်များ
ဇန်နဝါရီလ 27, 2018
ဒူဘိုင်းတွင် MBA ဘွဲ့ရဂျော့ဘ်
ကျနော်တို့ကအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အဘို့အ MBA ဘွဲ့ရဂျော့ဘ်များအတွက်စုဆောင်းကြသည်!
ဒူဘိုင်းတွင် MBA ဘွဲ့ရဂျော့ဘ် ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် GCC ကျော်အဓိကအားဖြင့်စုဆောင်း။ MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူအတိုင်ပင်ခံရှာဖွေနေကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုသင်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အများစု၏ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာဖွေ။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူများပြီးသား MBA ဘွဲ့ရပညာရေးရှိခြင်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာစုဆောင်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဖြေရှင်းရေးအတွက်သြဇာအခန်းကဏ္ဍကစားခြင်း, စကားပြော။ ရိုးရှင်းစွာအကြောင်း MBA ဘွဲ့ရ educatio နှင့်အတူလူယူပြီးအကောင်းဆုံးကိုကုမ္ပဏီတွေဟာဎ။ ရေရှည်မှာများတွင်အများဆုံးမှတ်သားလောက်နှင့်အတူစိန်ခေါ် အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုသည်။ နယူးအလားအလာကျွမ်းကျင်သူများကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းမှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ တစ်ဦးက Careerjet အလုပ် site ကို.
ရှာဖွေခြင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတလွှားတစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ။ တစ်ဦးအတိုင်ပင်ခံအဖြစ်, MBA ဘွဲ့ရအားဖြင့်သင်တို့ကိုထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ MBA ဘွဲ့ရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းလွှဲပြောင်းကျွမ်းကျင်မှုသည်။ ကျိန်းသေ, တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသက်သေပြပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့အနာဂတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပန်းတိုင်များအတွက်အကူအညီ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့က join ။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအသစ်အတိုင်ပင်ခံနှင့်တွဲဖက်ရှာကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့သည် MBA ဘွဲ့အတွက်အမှုဆောင်များကိုငှားရမ်းလျက်ရှိပါသည် ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ
သငျသညျကောင်းစွာပညာရေးအသိအမှတ်ပြုကြပါနဲ့ ?. ကြှနျုပျတို့မှာ ယခုကူညီပေးနေအင်ဒီးယန်းအမှုဆောင်အရာရှိ ဘို့ ဒူဘိုင်းတွင် MBA ဘွဲ့ရဂျော့ဘ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်လျှောက်ထားပြီးဒူဘိုင်းအလုပ်များအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Ph.D ပညာရေးသို့မဟုတ် MBA ကဲ့သို့သောဆင်တူချက်လက်မှတ်များရှိပါက။ သင်စနိုင်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း. စော်ဘွားအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်ရှာမည်။ ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအဘို့အကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေးပို့ပါ။ သငျသညျ MBA ဘွဲ့ရ edutation haveing ​​လျှင်သို့မဟုတ် Even တစ်ဦးက CEO ဖြစ်လာ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်။ ယနေ့တွင်စတင်ပါနှင့်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကိုကြည့် Monster စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဘယ္လို အလုပ်အကိုင်ကိုဒူဘိုင်းမှာရှာပါ MBA ဘွဲ့နှင့်
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှတက်။ အဘယ်သူသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဘို့နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြသ။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောရလဒ်များကိုပို့ဆောင်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့ရှုထောင့်အရ။ ရှင်းမှ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းနေ။ ဤအချက်များပေးထားကျနော်တို့အမှုဆောင်အရာရှိကူညီပေးနေနေကြသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းထိပ်ဘွဲ့ရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများနှင့်အတူစတင်။ Up ကို MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူအကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလုပ်ရှာဖွေသူများရန်။
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း, ဒူဘိုင်းများအတွက် တစ်ဦးကတော့ Uber အတွက်ကားမောင်းမှုအတွက်အခွက်တဆယ်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူလူပေါင်းရှာကြံကုမ္ပဏီများမှ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြ အိန္ဒိယပိုလတ်ဆတ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် MBA ဘွဲ့ရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ သူတို့အခွအေနမြေိုးခေါင်းဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူမန်နေဂျာ။ အကျိုးဆက်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းများအနှံ့အပြောင်းအလဲမောင်းနှင်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်လည်းအနည်းငယ်ပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ MBA ဘွဲ့ရဂျော့ရှာဖွေနေအတွက်လမ်းတလျှောက်။
MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ကိုရှာဖွေခြင်း ?. သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များထံသို့တိုက်ရိုက်ထိမှန်တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ LinkedIn အပေါ်သူတို့နဲ့တှေ့ရသူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လိုပါတယ်။ ထိုအရပ်၌မှ။ ထိုမှတပါးထိုသူတို့ကျူပင်သည်သင်၏အောင်ကသူတို့ကိုချဉ်းကပ် ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များများအတွက်လျှောက်လွှာအသေးစိတ်ကို.
ကျနော်တို့ထက်ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် MBA ဘွဲ့ရဂျော့ဘ်နှင့်အတူကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း
လစာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအတွက် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်မလွယ်ကူပါဘူးဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထိုအသင်ရုံလျှင် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ နှင့်သင်တန်းနှင့် အဆိုပါအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ။ သငျသညျသတိရရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအလွန်သံသယတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေခြင်း။ ယေဘုယျအားဖြင့် MBA ဘွဲ့ရများနှင့်အဘယ်သူအားမျှအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသာစကားပြော။ ကျိန်းသေ, အချိန်ယူပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်နေ့တိုင်းရှာကြ၏လျှင်။ ဒူဘိုင်းအသစ် MBA ဘွဲ့ရနေရာလွတ်သည်။ တစ်ဦးရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရောက်ရှိဖို့ကယ့်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေစိတ်ကူး။ လတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရလျှောက်ထားအခြေခံနှင့်အတူစတင်ပါ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ဒီလိုမျိုးရှာဖွေတာလွယ်ကူသည်မဟုတ်လို့ပဲ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ပညာရေးရှိခြင်းသူကိုလတ်ဆတ်တဲ့အမှုဆောင်အရာရှိ။ သင့် အလုပ်အကိုင်လျှောက်လွှာအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်။ ရိုးရှင်းစွာအသူတို့တွေအလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိခြင်းကြောင့်။ သို့သော်ရုံသစ်ကိုကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုအတွေ့အကြုံကိုတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့က MBA နှင့်အတူပိုလတ်ဆတ်များအတွက်အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်း။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်ကြပုံကိုအံ့သြဖွယ်။ တွေ့ရှိချက် ဒူဘိုင်းမြို့ဧရိယာအတွင်းအလုပ်အကိုင် အစဉ်အမြဲအချိန်ယူပြီး။ သငျသညျအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနိုင်သည်ဘယ်မှာအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ တစ်ဦးထက်ပိုလတ်ဆတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ယောက်အဖြစ် CV ကိုပေးပို့ခြင်း။ သင်ပင်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ် LinkedIn အပေါ်
အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအလျင်မြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အဖြစ် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူပိုလတ်ဆတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Google ကလျှောက်ထား။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်အိုင်တီ ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ။ အရူးဇာတ်လမ်းလိုကြီးထွားလာနေတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် 2020 ကုန်စည်ပြပွဲသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, သူတို့ကပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်။ သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်သင်ကလိုအပ်သည့်အခါသင်သည်သင်၏လက်၌အဆင်သင့်တဲ့ CV ကိုရပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်မထားပါနဲ့။
ဒူဘိုင်းလေဆိပ်အတွက် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်
အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်တစ်ခုမှာလေဆိပ်မှာအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်းများနှင့်တာဝန်များကိုနားလည်ခြင်း။ အပေါ် အစိုးရအလုပ်အကိုင်များယူအေအီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ ဒါကြောင့်နေပါစေသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကဘာလဲ။ The ဒူဘိုင်းလေဆိပ်အတွက် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင် အမြဲတမ်းပွင့်လင်းကြသည်။ အထူးသဖြင့်လတ်ဆတ်သောဘွဲ့ရကျောင်းသားများအတွက်။ ဒူဘိုင်းရှိလေဆိပ်တွင်။ HR မန်နေဂျာများ အစဉ်အမြဲအသစ်အကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေနေ.
သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်စုဆောင်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်နေ့ရက်သည်သင်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အများကြီး ပါကစ္စတန်ကနေကျွမ်းကျင်သူများ နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံ။ MBA ဘွဲ့ရထားရှိခြင်းနှင့်ပညာရေးနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဒေသခံကြော်ငြာတွေရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်ကျွန်တော်အမြဲဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်လုပ်ယူအေအီး၌တည်၏။ သင်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဒဏ္ဍာရီဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လူအများစုဟာရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းရှိကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာစေရန် သင်သည်လည်းထိုသို့ပြုမှမည်သို့အတော်ကြာလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။
အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ application များအစက်မရှိသောဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်တကယ်ပင်ထွက်ရပ် မိုဘိုင်း version ကိုရှာဖွေစုဆောင်းများအတွက်။ သေချာများအတွက် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးထားရှိခြင်းသည်ကိုသင်ကောင်းကောင်းပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်စေသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ application ကိုလူအစုအဝေးထဲကနေထွက်မတ်တပ်ရပ်ရပေမည်။ ပညာတတ်ပြည်တော်ပြန် အမြဲတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောသဘောပေါက်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရှိခြင်း။ ၏သင်တန်း, အကောင်းဆုံး CV ကိုနှင့်အတူလူကအမြဲ အလုပ်ပိုမြန်ရှာဖွေတာ။ သေချာသည်။
အဆိုပါစမတ် MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာဖွေ လမ်းအလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုပြီးလူတွေကိုဆက်သွယ်, ပိုပြီးစျေးကွက်သုတေသနဖို့ကြိုးစားပါ။ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဖို့အဓိကသော့ချက်လည်း MBA ဘွဲ့ရရှိသည်သောသူအမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းထွက်ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ထိုအလိုတော်ကိုသင်အစီရင်ခံစာတည်ဆောက်ရန်ပိုပြီးပွင့်လင်းအာကာသပေးသည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အမှုဆောင်အရာရှိငှားရမ်းရှာတွေ့.
ပါကစ္စတန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်
အမြဲပါကစ္စတန်ကနေပြည်ပရှိ ဒူဘိုင်းမှခရီးသွားလာ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာရှာဖွေနေ ပိုလတ်ဆတ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် MBA ဘွဲ့ရအလုပ်အကိုင်။ နှင့်အမြင့်ဆုံးစဉ်းစား ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလာပြီလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စော်ဘွားများအတွက်အဖြစ်မှန်အလုပ်ရှင်များအသစ် MBA ဘွဲ့ရအမှုဆောင်အရာရှိ likes ။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်, သူတို့ကနေလာမယ့်နေကြသည်ဘယ်မှာနေပါစေရှိသေး၏။
သို့သော်ငြားလည်း, သငျသညျစီအီးအိုရာထူးရှာတှေ့နိုငျ။ ထိုမှတပါး, သငျသညျအနိမ့်စီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားကိုရှာဖွေပါ။ ကျိန်းသေ, သင်ဒေသခံစျေးကွက်များတွင်အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကွိုးစားသငျ့တယျ။ ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများလျှောက်ထားနိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းတွင်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလွတ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပွငျလျှင်သင်ထားချင်ပါတယ်။ MBA ဘွဲ့ရစီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍအဓိကအားတာဝန်ရှိသည်။ အသစ်က client ကိုဝယ်ယူနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload ။ ငါတို့သည်ယူအေအီးအသစ်အလုပ်အကိုင်များဘို့သင့်ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်ပြန်လည်သုံးသပ် ဘယ်လောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ.
အဆိုပါအများစုဟာ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာပါကစ္စတန်ကနေကျွမ်းကျင်သူများ။ အသစ်သောလူတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့လွှဲပြောင်းရန်အလုပ်ရှင်ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အသစ်တစ်ခုကိုလူတစ်ဦးရှာဖွေနေအထူးသဖြင့်လျှင် ပိုလန်ကနေဒူဘိုင်းအတွက်နေရာချထားဘို့။ အောက်ပါနှစ်များတွင်နည်းပညာတက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်ရှင်များနှင့်ရှာဖွေစုဆောင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း အင်တာဗျူး အဆိုပါ skype ကျော်အွန်လိုင်း။
MBA ဘွဲ့ရ အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော အင်ဒီးယန်းများအတွက် MBA ဘွဲ့ရနာရီထက်ပိုလတ်ဆတ်ပြီးနောက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်။ သူတို့ရနိုင်သောအကောင်းဆုံးအပေးအယူတဦးဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးရယူပြီးနောက်။ MBA ဘွဲ့ရအတွေ့အကြုံကိုအတူ။ အခန်းကဏ္ဍကိုသင်စေသည် ဒူဘိုင်းအသစ် client များအတွက်အဓိကအားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ဝယ်ယူနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်။ သင်ကအလုပ်လုပ်ရမယ် အသစ်သော client များသို့မဟုတ်စီမံကိန်းနှင့်ပင်စျေးကွက်၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ ထို့အပြင်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ အတူတူ ဒူဘိုင်းအတွက်ထိပ်တန်း 7star ဟိုတယ်မန်နေဂျာများနှင့်အတူ။ ကောင်းသောဟိုတယ်များအတွက်မြင့်မားတဲ့ပညာရေးကျိန်းဝပ်နှင့်အတူယူအေအီးအတွက်အဓိကအားဖြင့်လူတွေလို့ပဲ။
ထိုနည်းတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အဆောက်အဦးများနှင့် အမှတ်တံဆိပ်အသိအမြင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်။ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိမျဉ်းလှုပ်ရှားမှုများတိုးတက်အဖြစ်။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေ by အလားအလာကိုပစ်မှတ်ဖို့ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ရန်။ အဖွဲ့အစည်းမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရောက်စေဖို့ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေဒူဘိုင်းအတွက်အိန္ဒိယအသစ်အလုပျသမားမြား။ သို့သော်အခြားနိုင်ငံထိုကဲ့သို့သော တောင်အာဖရိကကိုလည်းကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုလာပြီ။ အထူးသဖြင့်အစိုးရသစ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရှိရာဘူဒါဘီ၌တည်၏။
ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများသည်အသစ်သော CV ကိုဖွင့်ဖွင့်ကြသည်။ ဒါကြောင့်, ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများတွင်အင်ဒီးယန်းများအတွက်အလုပ်အကိုင်များနေရာလွတ် ကျိန်းသေဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအများအပြားဆောင်းပါးတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ငါတို့သည်မြော်လင့်စရာရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သငျသညျသစ်တစ်ခုဧည့်သည်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတှေ့လိမျ့မညျ အကြံဉာဏ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ bits သည်ကိုဖတ်ရှုရသဖြင့်။
လိုချင်သောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရသောအခါ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်
high-အရည်အသွေးအရည်အချင်းကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ: MBA ဘွဲ့ရပိုမိုနှစ်သက်ပြည်ပမှာလေ့လာခဲ့ကြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့မဟုတ်ကနေဒါသို့မဟုတ်ဥရောပသည်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သင်ကအနည်းဆုံး 1-5years ရှိရမည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရောင်းအလုပ်အကိုင်များအတွေ့အကြုံ ရုံအကြီးတန်းအမှုဆောင်မန်နေဂျာအဖြစ်စတင်ပါရန်။ အများစု ဒူဘိုင်း ကုမ္ပဏီများ။ စျေးကွက်၏အားကြီးသောအသိပညာနှင့်အတူအသိဉာဏ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလိုအပ်သည်။
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကိုအကောင်းဆုံးသူတွေကိုဒူဘိုင်းမြို့တော်တဝိုက်ရွှေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်သောသူဖြစ်ကြ၏။ အဘို့ ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုသင်စဉ်းစားသင့်တယ်, အအေးခေါ်ဆိုမှုပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါ့အပြင်ဒေတာများစသည်တို့ကိုစုဆောင်း ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ကောင်းသောပညာရေးအသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများခိုင်မာတဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှိခြင်းနှင့်အတူကျောင်းများအနေဖြင့်ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာနောက်ထပ်ကဏ္ဍဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ အဆိုပါသာအဆိုးမြင်အတွေးတွေသူတို့ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုသင် looing နေကြသည်လျှင်, သူတို့သည်ပြန်ရရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ကောင်းသောဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပြည်ပထိတွေ့မှုပေါင်းအားသာချက်။ သငျသညျချင်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာအလျှင် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်.
ok, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုအရပျ၌အကောင်းတစ်ဦးပညာရေးရှိခြင်းနေကြသည်။ ယခုသင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုထွက်ရှာတွေ့။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျခုနှစျလုံးစော်ဘွားအကြောင်းကိုနည်းနည်းသိကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းဖြစ်လာအလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာ။ သည်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသောသူသည်ယူအေအီးသို့သွားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အများကြီးရှိပါတယ်သင်ပြောပြလိမ့်မယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာပိုသောနေရာများ။ နာမည်ကျော်အဘူဒါဘီနဲ့ရှီးရှိပါသည်။ ဤအရာအလုံးစုံသောနေရာများ၌သင်တို့ကိုကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများအားအကြံဉာဏ်ကိုအကောင်းဆုံး bits သည်တဦး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျွန်ုပ်တို့၏မှာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် စုဆောင်းမှုအဘို့ကိုလမျးညှနျ။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်မှာသူတို့ကိုချဉ်းကပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ သငျသညျအလုပ်ရှင်များနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ် နှင့်သေချာသူတို့သည်သင်၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita လက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟုစေရန်။ ဥပမာတစျခုနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် မော်တော်ယာဉ်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်သင်၏ CV နှင့်အတူအတွက် pop နှင့်သူတို့သည်သင်၏အရောင်းမိန့်ခွန်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်သေချာအောင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြေတပြင်လုံးလမ်းညွှန်ရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှာဖွေနေသည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းကိုအများအပြားဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့သောအတှေ့အကွုံနှင့်ကျောင်းပညာရေးရှိသည်ဖို့လိုအပ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်များတကယ်လူတွေကိုအကြံပေး ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့။ သငျသညျအလုပ်ရှင်များအဘို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းကြဘူးလျှင်မူကားအကြှနျုပျတို့သညျမကူညီနိုင်ပါ။
ကျနော်တို့ကသုံးပါဖော်ပြသည့်အတိုင်း မွန်ဘိုင်းစီးတီးရှိလမ်းညွှန် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ကြ စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်။ သငျသညျကျိန်းသေသင်တို့အဘို့တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ပါကစ္စတန်နှင့်အိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများ၏အချို့။ ယခုပင်လျှင်အများအပြားနှင့်အတူကံများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကူဝိတ်၌အကြှနျုပျတို့၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပြထံမှကမ်းလှမ်း.
ဒူဘိုင်းအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်း MBA ဘွဲ့ရအလုပ်ရှာတွေ့မှဘယ်လိုနေသလဲ?
ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့မှ ok, အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ၌မသာ။ သငျသညျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစုဆောင်းဖို့လျှောက်ထားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျရှာတှေ့နိုငျ ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကနေကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်း။ ထိုအထိုကဲ့သို့သောကာတာနိုင်ငံနှင့်ကူဝိတ်အဖြစ်အလုပ်ကတခြား GCC နိုင်ငံပေါင်း။ MBA ဘွဲ့ရအမှုဆောင်အရာရှိအများအပြားလူအမျိုးမျိုးထံမှလုပ်နေကြသည်။
နှင့်ယူအေအီးအတွက်ရေပန်းအစားဆုံးကလူအင်ဒီးယန်း, ပါကစ္စတန်နှင့်များမှာ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရှာဖွေနေကြသူဖိလစ်ပိုင်ကလူ။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကောင်းမွန်တဲ့ရာထူးတွေရှာနေကြတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကယူအေအီးမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်နေလို့ပဲ။ ဖြေရန် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်တစ်ခုမည်သို့ရှာရမည်နည်း ပိုမြန်လမ်းအတွက်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီတွင်နေထိုင်အချို့အတှေ့အကွုံရ အရှေ့အလယ်ပိုင်းအလုပ်ရှင်များကနေ။ ပြီးတော့အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။
အဆိုပါ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ လျှော့တွက်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းသည်။ နှင့်လက်တွေ့မှာတော့သူတို့ဖြစ်ကြသည် ယူအေအီးကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရရှိ။ ၏သင်တန်းမြင့်မားတဲ့ paid လုပ်ခနှင့်အတူ။ အမြိုးသမီးတပြည်တော်ပြန်အများကြီးစီးပွားရေးတည်ဆောက်ပုံအကြောင်းကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေကြသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအာရုံစိုက်နှင့်အလုပ်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှု generate ယူအေအီးမှရွေ့လျားနေစဉ်။ ကြောင်းခေါင်းစဉ်ရဲ့အဆုံးမှာအခြားအစစ်ဆေးကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အကြံပြုချက်များ။ ကျနော်တို့ကသင်တို့အဘို့ဆင်းသက်ကူညီပေးပါမည်ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမ်းမရိတ်အတွက်အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက်.
ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေ MBA ဘွဲ့ရအလုပ်!
တစ်ဦးကိုရှာပါ MBA ဘွဲ့ရ ဒူဘိုင်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ယောဘ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းစွာအတစ်စတင်ရန် အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒူဘိုင်း!
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်စီးတီးကြီးထွားလာအမြန်ဆုံးပါ! - ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ယခု Sharjah အတွက်ကူညီပေးနေ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များ, သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရနိုင်သည်။